Mmiri na-edozi mmiri, Mmiri na-eguzogide ọgwụ Polyester
MH Mmiri mmiri na-arụ ọrụ mmiri nwere mmiri pụrụ iche
MH eri mmiri na-adịghị eri mmiri nwere ihe pụrụ iche nke mmiri na-eguzogide ọgwụ nke na-egbochi mmetụta mkpuchi ahụ, si otú ahụ hụ na ọ dịghị mmiri na-ejikọta ya. Mgbe a na-eji erigbu akwa ahụ, a na-egbochi ịkwafe mmiri site na oghere olulu ahụ.
MH eri mmiri na-ekpuchi mmiri nwere ikike magburu onwe ya na-emetọ mmetọ na ịnọgide na-adị ọcha ogologo oge; ezigbo mmachi ihu igwe na ogologo ndụ dị irè, nguzogide UV, nguzogide oxydation; ezigbo ụlọ ọrụ na nkwụsị nkwụsi ike, àgwà njedebe; ọ dị mma ka iguzogide gị.
Spec: Ogo ya zuru oke bụ 20/2, 30/3, 40/3
agba: na 800 agba, ọ nwere ike dakọtara n'ụzọ zuru oke na-adụkọta ákwà.
Product Akụkụ: Nnukwu arụmọrụ mmiri, Mmetụta dị nro, Ezigbo Ike Ike & Ọdịdị, Nrụpụta dị elu, Agba Agba sara mbara, Nnukwu Nguzogide Chemical
ngwa: Ọ dị mma maka ịkwa akwa tarpaulin nke ụlọ nkwakọba ihe, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụgbọ ala, ụgbọ oloko, ụlọ ọrụ, ihe ndị e ji azụ anụ ụlọ, wdg. Ọ na-ejikarị uwe, ngwaahịa ndị agha, njem n'èzí, nlegharị anya na mpaghara ndị ọzọ.
30/3 3000y eriri mkpuchi mmiri
30s / 2 Eriri mmiri na-egbochi mmiri
20S / 2 Eriri mmiri na-egbochi mmiri